DIGAAGGA LAKABKA LEH: KORITAANKA, DARYEELKA IYO QUUDINTA, SIDA LOO KORO COBB 500 500 WAKHTI GAABAN, IYO SIDOO KALE TIKNOOLAJIYADA TARANTA, XAALADAHA HEERKULKA IYO XAALADAHA KALE - BEERAHA DIGAAGA
Inta badan dadka degaanka xagaaga iyo beeralayda leh beeraha guryo badan, su'aashu waxay soo ifbaxaysaa sida loo isticmaalo dhulkan.
Waa fikrad wanaagsan in la koro digaagga broiler qol gaar ah oo lagu dhisay qolka qotada dheer, ama baqashooyin gaar ah oo qalabaysan.
Waa adag tahay in laga hadlo ku saabsan faa'iidooyinka digaagga broiler ee digaagga caadiga ah.
Tani waa caddayn tirooyin iyo xisaab fudud oo fudud: digaag caadi ah ayaa la koray muddo 50 cisho ah waxaana la gaari karaa miisaan culus oo nool, halka digaagaha broiler dhamaadka mudadaas la siiyo hal iyo badh, ama xitaa kiilogaraam oo hindis ah, hilib nafaqo leh.
Broilers ayaa u muuqday sida noocyada digaagga ayada oo ay uga mahadcelinayaan khibradda Ingriiska iyo beeraleeyayaasha Maraykanka sida nooca digaagga. Waxaa jira noocyo kala duwan oo ah digaagga broiler.
Waxaad ka iibsan kartaa digaagga midkood beeraha digaaga ama ganacsatada gaarka ah ee suuqa. Sida loo iibsado digaagga iyo sida loo daryeelo?
Sidee loo iibiyaa digaagga broiler?
Sida horey loogu soo sheegey kor, waxaad ka iibsataa digaaga digaagga beeraha digaaga. Sidaas ayaad naftaada uga badbaadinaysaa qashin, sababtoo ah xaaladaha nadaafad wanaagsan ayaa loo abuuray digaagga ka yimaada soo saarayaasha waaweyn. Tani macnaheedu waa in dadkaaga broiler aysan dhimaneynin cudurada faafa ama cudurada faafa.
Waxaad sidoo kale ka iibsan kartaa digaagga shakhsiyaadka gaarka ah, halkan waxaad fursad u leedahay inaad si fiican u baartid waxa aad weli iibsaneyso.
Kufsaarayaasha furiinka badanaa waxaa lagu iibsadaa da'da tobanka maalmood ee ugu horeeya dhalashadooda.
Markaad doorato digaag, hubso in ay tahay mid firfircoon, firfircoon, indhahana leh.. Ha siin wax doorasho ah oo aan ku noolaan karin, digaagdarrada cufan oo leh qori xun. Sidoo kale iska ilaali inaadan dhiigbaxin xudunta xerada.
Digaagdaha waaweyn, qiimaha qaaliga ah ayaa kuugu kacaya, sababtoo ah tani waxay kordhineysaa suurtogalnimada wax-soo-saarka taranka ee broiler.
Digaagga quudinta ee guriga ayaa u baahan aqoon aqoon gaar ah oo kaliya oo ku saabsan digaagga naftooda, laakiin sidoo kale ku saabsan quudinta.
Si aad u ogaatid dhibaatooyinka digaagga sii kordhaya, waa ku filan inaad akhriso maqaalkan.
Sidoo kale beeraleyda asaasiga ah, su'aasha dhabta ah waa inta hargab ee ugu horeysa ee iibsashada. Ugu horreyntii, ka gudub meheradda aad mustaqbalka u qoondayso xoolahaaga. Maskaxda ku hay in digaagga digaagga ee waxtarka leh ee waxtarka leh uu ka kooban yahay hoos u dhigis xeeladaysan oo bannaan iyo dhaqdhaqaaq bilaash ah oo loogu talagalay broilers. Ugu horreyn, tusaale ahaan, ku hayso 20 broilers halkii mitir labajibbaaran ee madaxaaga, adoo tixgelinaya booska beertaada kabista ah, ka iibso digaagga.
Beeralayda iyo beeraleyda, oo leh beer, waxaa jira doorasho wanaagsan oo ku saabsan shuruudaha ay ku koraan digaagga waaweyn. Si kastaba ha ahaatee, waxaan jeclaan lahaa in aan tixgeliyo qaar ka mid ah kuwa ugu caansan iyo xitaa siyaabaha bilowga ah. Tani waa barbaarinta digaagga ee gogosha sariirta iyo baqashada.
Ugu horreyn, ganacsade kasta waa inuu abuuraa shuruudo loogu talagalay broilers si ay digaagga u helaan iftiin ku filan, joogaan qol fiican oo hawo leh oo ay leeyihiin meel aad u yar si digaagga ay u helaan miisaan degdeg ah.
Taas awgeed waxaad u baahan tahay inaad qalabeysid guriga. Waa inay noqotaa si fiican u hawo, hawo wanaagsan, si kastaba ha ahaatee, kuleylka ilaalinta. Waxaa lagugula talinayaa in aad sameysid biyaha aan biyaha lahayn. Guriga horay u hubi dhammaan noocyada jiirka.
Si arrintan loo sameeyo, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daadiyo dhadhanka dabaqa horay loo buuxiyey, kabaha laga soo saarka miraha, jajabkii hadhuudhka la jajabiyey iyo peat. Dhamaan waxyaalahaas oo dhan waa in si fiican loo qalajiyey, ujeedkana waxaa la goosanayaa bilaha xagaaga iyo horeyba xilliga dayrta ama xilliyada kale ee sanadka, markaad qorsheyneyso inaad ku mashquuliso furitaanka loola jeedo, u sujuuda kubad qaro weyn.
Dheeraad ah waxaad dhigeysaa quudinta quudinta iyo baaqa cabitaanka. In bowdada cabitaanka waa inay noqdaan biyo qabow (fikradda beeralayda Maraykanka), ama si diiran u diiran.
Hadda waxaad u baahan tahay inaad ka fekerto waxa shuruudaha aad u baahan tahay si aad u abuurto guriga. Ugu horreyn, ka feker inaad ku furtid qolka. Xaqiiqdu waxay tahay in horumarinta wanaagsan ee qoyaanku ay tahay inay noqdaan ugu yaraan 60%. Hawada ciraddu waxay keeni doontaa dhammaan noocyada infakshanka digaagga, iyo qoyaanka xad dhaafka ah waxay keeni karaan cudur neefsasho.
Ha ilaawin in qoyaan badani ay sidoo kale ka imaanayaan bowdada cabitaanka. Hawadu waa inay ahaato mid dhexdhexaad ah oo nadiif ah.
Heerkulka guriga inta lagu jiro xilliyada kala duwan ee nolosha digaagga waa inay kala duwanaadaan. Ka hor inta aanad iibsan badmaaxiinta, u dhig heerkulka ilaa 25 darajo. Horeba ka hor intaan la dhigin digaagga guriga, fumigate dhinaca hore ee laambadda, taas oo noqon doonta ilaha ugu muhiimsan ee kuleylka, lakabka qaro weyn ee waraaqda iyo sida balka, taas oo noqon doona sariirtaada qoto dheer. Heerkulka ka hooseeya laydhku waa inuu u dhexeeyo 15 iyo 30 darajo.
Under shaashadda aad dhigto iyo quudinta. Hase yeeshee, waa in ay ahaato mid ku filan dhammaan digaagga, si kastaba ha ahaatee, fadlan ogow in qof ka mid ah caruurtu ay kori karaan jabka sababtoo ah xaqiiqda ah in aysan u oggolaan in digaagga ay sii xoogaystaan. Tani waa mabda'a caadiga ah ee xulashada dabiiciga ah.
Heerkulka qaarkood ayaa lagu gaari karaa caawinta nalalka gaarka ah ama kuleyliyaha. Daar daboolka ka mid ah guriga si ay digaagga u seexdaan halkaas. Maalinta ugu horeysa ee broilers sii kordhaya, saacadaha iftiin ee iyaga waa inay ahaadaan 24 saacadood. Maalinta 10aad ee korriinka digaagga, waa in la siiyaa kuleyl iyo iftiin aad u daran, oo beddelaya laba saacadood. Haddii aadan samayn karin tan, hal sabab ama mid kale, ka dibna xaddid saacadaha maalintii ee digaaggaaga ilaa 16 saacadood.
Sidaas Laba todobaad oo qashin ah waa in lagu hayaa heerkul ah 30 darajo, digaag saddex toddobaad ah ayaa hoos u dhacay shan digrii, iyo chicks in aad sii kordhaysay illaa bil gudaheed, abuurto heerkulka 20-degree.
Marka digaagga ay gaarto labaatan maalmood, iftiinka ayaa laba jeer dhimi karaa. Waxaa muhiim ah in la xasuusto in marka hore ay lagama maarmaan tahay in la kala saaro faraca u dhexeeya digaagga iyo qoob-ka-shaqeeyayaasha waxayna abuuraan xaalado korriimadooda kalluunka kala duwan.
Maalinta tobnaad, waxaad ka saari kartaa xayndaabka hareeraha iftiinka ama kuleyliyaha, buuxi quudinta quudinta, warqadda gubi. Inta lagu jiro koritaanka shimbiraha, dhererka quudinta waa inuu kordho.
Inta lagu jiro kobcinta guud ee broilers waa lagama maarmaan in la kormeero dabeecadooda, haddii digaagga ay ku faafaan shimbirahooda iyo faafinta baalashooda, shahaadada waa in la dhimo. Haddii ay ku ururaan tuulooyinka oo ay kufadhiyaan kubbadaha waxaa lagama maarmaan ah in ay kor u qaadaan xaalada heerkulka.
Beeraha xayawaanka ah waxay noqonaysaa mid caqli-gal ah oo lagu dhisayo baqashada shimbiraha. Waxay ku xiran yihiin dhowr qaybood (sida caadiga ah, laba ama saddex tiir) si ay u badbaadiyaan meel. Sidaas darteed aad si weyn u badbaadin doonaa iibinta iyo rakibidda qashin qoto dheer. Xaaladdan oo kale, looma baahna. Intaa waxaa dheer, content ee baqashada waxay si weyn u yareysaa fursadda cudurka cudurka dadka.
Ugu horreyntii, waa lagama maarmaan in la dhigo 10 lakab oo qafis ku jira qaabka nuska mitir labajibbaaran oo aan laga saarin halka ilaa dhammaadka dufanka (50-60 maalmood).
Heerkulka waxaa lagu go'aamiyaa da'da digaagga waxaana si adag loo fiiriyaa, tan guurka ka jira qafisku wuxuu xaddidaa dhaqdhaqaaqa mana dooran karo meel aad u raaxo leh naftooda. 50 maalmood oo digaag ah waxay u baahan tahay heerkul ah oo keliya qiyaastii labaatan darajo.
Xaaladda digaagga sii kordhaya ee baqashada dhamaadka digaagga naaxinta ayaa gaari doona tiro dhan 1.4 kg oo leh 35-36 oo mitir mitir laba jibbaar ah, qolfaha-1.6 kg oo leh 30 wiqiyadood.
Nidaamka iftiinka ee unugyada ayaa loo qoondeeyey sida soo socota: saddexda usbuuc ee ugu horreeya, 24 saacadood maalintii, kadib, 17-18 saacadood maalintii.
Digaagga Broiler waxaa loo qaybiyaa da'da. Digaag 1-5 maalmood ah ayaa la siiyaa raashin gaar ah oo si fiican loogu milmi karo biyaha waxaana si weyn loogu naqshadaa qufaca huurka.
Haddii aysan jirin cunto noocaan ah, u qalantaa in la siiyo ukun la kariyey. Halbeegga quudinta ee digaagga shan-maalmood waa inay ku jiraan sarreen, galley, shaciir, budada caanaha. Laga bilaabo maalinta shanaad ilaa bisha waxaan diyaarinnaa raashinka ugu weyn ee shimbiraha. Waxay ka koobnaan doontaa qamadida, hadhuudhka, kalluunka iyo cawska, cowska calafka, kalsiyum ka ah kobaca lafaha (macnaheedu waa 1% wadarta guud), dufanka calafka, iyo budada caanaha.
Dhexdheer ee kicinta digaagga, taas oo ah, maalinta soddonaad, cuntada dhamaystiran waa in laga saaraa ka kooban halbeegga caanaha. Laakiin waxaad ku dari kartaa cuntada qashinka kala duwan ee qashinka: Xirmooyinka khudradda, khudradda la kariyey, rooti la qalajiyey, iyo halkii calcium, ukunta shredded loo isticmaalo.
Digaagga broiler waa in la keenaa borotiin. Way fiicnaan doontaa haddii aad ku darto quudinta ugu weyn caano, caanaha ama caanaha. Sidoo kale maalinta kowdeeda, waxaad ku dari kartaa qashinka shimbirta ah, 6 garaam oo digaag ah. Cuntada xayawaanka ah waxaa lagu siiyaa 3-5 garaam oo kala duwan oo ah nolol maalmeedka broiler. Cuntada shimbirkani waa karooti, ​​waxaad ku dari kartaa digaag todoba maalmood ah.
Caleenta digaagga Paduan waxay leedahay muuqaal xarrago leh, iyo tirada midabada kala duwan ee shimbiraha waxay ka farxin karaan wax beerashada digaaga!
Cinwaanka //selo.guru/ptitsa/kury/porody/myaso-yaichnye/polverara.html waa sharaxaad ka mid ah digaagga Polverara.
Fiitamiinada waxaa la siin karaa digaagga, laga bilaabo shan maalmood oo da'da ah. Sii daawooyinka fitamiin A iyo E. Ha siinin ciid si broze. Si looga fogaado cudurka lafaha ee digaagga, waa inaad ka fekertaa ku darida qaabka lafaha cuntada, qolofka la jajabiyey iyo wax kasta oo ka mid ah calcium. Vitamiinada ayaa sidoo kale gacan ka geysanaya xoojinta lafaha.
Waxaad sidoo kale isku dayi kartaa inaad siiso raashinka gaarka ah ee digaaga lagu sameeyey beeraha digaaga. U iibso qadaro ku filan, mana aha inaad diyaariso cunto loogu talagalay cunnuga guriga.
Sidee looga fogaadaa cudurrada xoolaha?
Si digaagdooda looga ilaaliyo belaayada, waa lagama maarmaan marka hore si loo abuuro xaalado wanaagsan oo loogu talogalay koboca iyo koritaanka. Samee xaalado aad u fiican oo loogu talagalay chicks ee guryaha digaaga ama baqashada. Si arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad xakameyso nalalka, heerkulka iyo qoyaanka. Dabcan, mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee caafimaadka digaaga ee broiler waa nafaqada.
Sida qoyaanka hawada, waa in aan marna la kordhin. Midna ma dhicin. Dhab ahaan 60% waa inay noqdaan hawo qoyan ee guriga ama qafiska. Haddii hawadu aad u qoyso, shimbiruhu way engegi doonaan.
Kuleylka hawadu waa inuusan noqon mid cabir ah oo sababi kara caro ku dhaca maskaxda neefsiga ee digaagga.
Sida iftiiminta, waa inaysan noqon mid kufilan, sidaas darteed shimbir waxay leedahay fursad u hurdo. Sidoo kale ha ilaawin in iftiin aad u dhalaalaya ay u horseedi karto qaniinyada broiler. Laakiin marka laga reebo, waxaa jiri kara sababo kale oo loo qaniinayo: la'aanta borotiinka ee cuntada, ama dhalada, qoyaanka iyo qoyaanka qashinka. Haddii ay si lama filaan ah u bilaabmeen dhererka, waxaa habboon in lagu waraabiyo digaag leh lakin, lagu qasi jiray biyo.
Waxaan u jeedaa cunto. Isku day inaad meel bannaan ku sameysid guriga si ay dhammaan broilayaashu u cunaan si siman. Tani waxay kordhin doontaa tirada xoolaha caafimaadka leh.
Digaagga inta badan waxay qabaan dhibaatooyin mareenka caloosha, taasina waa mid u qalma in la fiiriyo waxa shimbirta cuno. Si looga fogaado tan waa mid sahlan. Saddexda toddobaad ee qashinka ah waa in la siiyaa kareemka dhalooyinka lagu qasi karo biyo. Sii xalka saddex asbuuc walba.
Marka hore, digaagga waxay u baahan yihiin in ay cunaan sideed cunto oo maalintii, dhamaadka quudinta waxaan cunto siinaa afar jeer maalintii.
Sida kuwa cabta, si looga fogaado cudurka daacuunka, waa inaad si joogto ah u buuxisaa oo u nadiifisaa. Biyaha ku jira khamrigu waxay noqon karaan kuwo qabow iyo diiran. Si kastaba ha ahaatee, marna ha u qaadin ilaa 30 digrii, haddii kale shimbirku wuxuu joojin doonaa cabbitaanka.
Si looga fogaado infekshinka, qufac iyo cabitaanba waa la dhaqaa oo la nadiifiyaa maalin walba, toddobaadkii hal mar waa in la dhaqaa soodha ama saabuun. Toddobaad kasta waxay u qalantaa miisaanka digaagga si loo go'aamiyo waxtarnimada quudinta.
Taariikhda sii kordhaysa
Xulashada habboon ee adiga ayaa noqon laheyd inaad digaag iibsato inta u dhaxeysa da'da illaa toban maalmood iyo kobcinta illaa 50-60 maalmood. Maaha mid aad u wanaagsan in la cuno digaag maalinta lixaad, sababtoo ah waqtigaan digaaggu wuxuu helayaa dillaaciisa oo diyaar u yahay in la gawraco. Quudinta sii deynta ee digaagga waxay noqon doontaa mid aan caqli lahayn, tan iyo hilibka da'da da'da broiler ayaa lumisa tayada.
Digaagga waxay u baxaan in la gawraco da 'yar waxayna keenaan qadar wanaagsan oo hilib shimbir ah.
Xitaa a newbie waxay awoodi doonaan inay digaagaan ku karsadaan guriga - beeralayda, shimbiraha waxay leeyihiin hilib dhadhan fiican leh waxayna si buuxda u daboolaan kharashyada oo dhan faa'iido fiican. Ha ka baqin inaad kiciso digaagga broiler, sababtoo ah shimbirkan ayaa faa'iido badan ka helaya shimbiraha kale ee gudaha.